ခေါင်းမော့တယ်ဆိုတာ လွှမ်းမိုးမှု ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဂုဏ်ယူမှုကို ပြတာပါ။ ခေါင်းမော့ထားခြင်းဖြင့် ဘယ်သူနဲ့ပဲ စကားပြောပြော ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု မြင့်မားစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် အစည်းအဝေးလို လူတွေကြားထဲ စကားပြောရမယ်ဆို ခေါင်းမော့ထားလိုက်ပါ။
သင့်ကို စကားပြောနေသူနဲ့ ဆက်သွယ်ချင်ရင် သူ အသစ်တစ်ခု ပြောလိုက်တိုင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပါ။ အဲဒါဟာ သူတို့ကို သဘောတူတယ်ဆိုတာနဲ့ သင် သူပြောတာကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ နောက်တစ်ခေါက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခင်ပွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြောရင် ခေါင်းငြိမ့်ပြောပါ။
၃. ခြေထောက်တွေကို လိမ်မထားပါနဲ့။
ခြေလိမ်ထားတာဟာ သင်က ပြောနေတာတွေကို နားမထောင်ဘူး ညှိနှိုင်းမရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံ ပေါက်စေပါတယ်။ ပိုက်ဆံလာချေးသူနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် သင့် Boss နဲ့ဆိုရင်တော့ ခြေခေါက်ခွဲပီး မတ်မတ်နေတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
လက်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတာလဲ ခြေလိမ်ထားသလို ခုခံတာကို ပြတာပါ။ လက်ပိုက်လိုက်ရင် သင်နဲ့ စကားပြောနေသူနဲ့ သင့်ကို ပိုပြီး ဝေးကွာသွားစေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ မြန်မြန်ဆက်သွယ်ချင်ရင် လက်ပိုက်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၅. တစ်ဖက်လူရဲ့အမူအရာကို လိုက်တုပါ။
တစ်ဖက်လူတစ်ယောက်ပုံစံကို အကုန်လုံး လိုက်တုနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလက်ပိုက်ရင် လက်လိုက်ပိုက်ပါ။ သင့်ကိုကြည့်ရင် ပြန်ကြည့်ပါ။ စကား ဖြည်းဖြည်းပြောရင် ဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြောပါ။ အဲဒါဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ပိုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်သလို ခံစားရစေပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ သုံးလို့ရပေမယ့် Date လုပ်တာတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ့ဆုံတာတွေ၊ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေမှာ ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
၆. တကယ်ဆက်သွယ်ဖို့ ရယ်ပါ။
ပျော်ရွှင်ပြီး ရယ်နေတဲ့ မျက်နှာထက် ပိုကောင်းတာမရှိပါဘူး။ ရယ်တယ်ဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ကြား အဆုံးမဲ့ ဆက်သွယ်သွားမှ ရယ်ဖြစ်တာပါ။ Date လုပ်နေတုန်း ရယ်ရင်လဲ သင့်ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဟာသလေးပြောလိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ Boss လောင်းကို ပိုပြီး သဘောကျ သွားစေပါတယ်။
၇. လက်တွေကို မြှောက်မြှောက်ပြီး စကားပြောပါ။
လက်ဟန်နဲ့ ပြောနေတုန်း လက်မြှောက်ပြီး စကားပြောခြင်းက သင့်ကို ယုံကြည်ရတဲ့ ပုံစံ ပေါက်စေပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင်ပြောနေတဲ့သူဆီက သင် ဘာမှ ဖုန်းကွယ်မထားဘူးဆိုတာ ပြတာပါ။
Source: bago knowledge
Read 3298 times Last modified on Monday, 08 May 2017 12:03
အရည်အချင်းရှိတဲ့ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်ပေးသင့်လဲ
ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ပြင်သစ်မှာကျောင်းတက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများတွက်အသုံးဝင်မယ့် Link များ